Iflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla embindini wed - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla embindini wed
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMilica
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla esandul 'ukulungiswa, ekumbindi wesixeko saseBelgrade, ekumgama omfutshane ukusuka kwisikwere esikhulu.
Ilungele abo bafuna ukubuka iBgd, bazive bekhuselekile kwaye bonwabele le ndawo.
Le penthouse itofotofo inesitudiyo sale mihla esitsha esinefenitshala kwisakhiwo sembali embindini wedolophu. Inebhedi enkulu, igumbi lokuhlambela, ikhitshi elisisiseko, i-Wi-Fi, i-airconditioner kunye ne-TV. Isembindini wedolophu, kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kuzo zonke iindawo eziphambili zokukhenketha, iivenkile ezininzi zokutyela, iivenkile zokubhaka, iibhari, iivenkile zokutyela kunye neendawo zokutyela. Ilungele abantu abatshatileyo nabathandanayo.
Unokufumana isidlo sakusasa phezu kwezinto ezibhakiweyo ozibambileyo kwiDzordza Vasingtona St (Ekunene, NguGeorge Washington St!). Okanye ungathenga iziqhamo ezisandul 'ukuvunwa nokutya kwasesitratweni kwindawo ekufutshane. Unokonwabela isidlo esimuncis' iintupha esineemvumi ezikumbindi weYurophu ezikwisitrato esiyiBohemian, eSkadarlija. Ungahambahamba kwiziko lembali laseBelgrade, uze ufikelele kwiindawo ezidumileyo ezifana neTerazije, iDorcol uze ufumane eyakho i-café encinci ye-hip/ibhari nakwesiphi isitalato. Ukuhambahamba okubandayo kungakuthatha ukuba ubone iPaki ye-Kalemegdan enembali nenqaba endala, indawo epholileyo eluhlaza nebalaseleyo yemilambo emibini. Ungangena kubumnandi basebusuku obucacileyo baseBelgrade kufutshane neendawo ezikufutshane ngaphandle kweengxaki zeeteksi. Konke kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, okanye ufuna amacebiso malunga nendawo oya kuyo kunye nento onokuyenza edolophini, nceda ukhululeke ukubuza.
4.96 · Izimvo eziyi-250
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ibalungele kakuhle abakhenkethi abafuna ukubuka isixeko uhamba ngeenyawo. Kwakhona zininzi iikhefi neevenkile zokutyela ezintle ezifikelelekayo!
Umbuki zindwendwe ngu- Milica
I'm Milica, a freelancer, passionate about traveling and meeting new people.
After having great experience via airbnb, I decided to renovate this apartment and offer travelers who want to visit Belgrade same kind of accomodation I like to have on my vacations. Staying in the city center and being able to rest during the day after morning stroll, having a comfortable bed and why not an aesthetic pleasure!
After having great experience via airbnb, I decided to renovate this apartment and…
Ukuba ufuna nantoni na, ndifumaneka imini nobusuku , ndiza kuphendula nawuphi na umbuzo onawo kwaye ndiza kukuvuyela ukucebisa ngeendawo omele uye kuzo.
Iilwimi: English, Русский, Español, Türkçe